Rugby : hofoanana ary hosoloina ny fifaninanana “Top 14” | NewsMada
Manomboka amin’ity taona 2016 ity, tsy hisy intsony ny fifaninanana “Top 14”. Hanana endrika vaovao mihitsy ny fiadiana ny ho tompondaka na ho an’ny ligin’Analamanga na ny fifaninanam-pirenena.
Hiova ny fifaninanana eo amin’ny taranja rugby, manomboka amin’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Araka izay efa nambaran’ny tomponandraikitra teo anivon’ny federasiona malagasin’ny rugby (FMR) mantsy, tsy hisy intsony ny fihaonana eo amin’ny “Top 14”, izay nosahanin’ny ligin’Analamanga, hatramin’izay.
Voalazan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny federasiona fa hatao “Top 16” izany lalao izany. Raha ny fanazavana, hozaraina roa ireo ekipa mifaninana. Mifandimby mihaona ireo fileovana iray tarika ka midina any amin’ny diviziona ambany ireo efatra farany, izany hoe, ny roa mitana ny rambony isam-bondrona.
Hatreto kosa anefa, tsy mbola voafaritra ny fomba hametrahana ireo ekipa handrafitra azy ho “Top 16”. Araka ny vaovao, tsy maintsy jerena tsirairay ny trangan’ireo klioba isanisany. Ny vokatra azony, ny filaharany sy ny mety ho herijikany.
Marihina fa fepetra napetraky ny federasiona iraisam-pirenena (IRB) ity fanovana ny endriky ny fifaninanana eto Madagasikara ity. Voalazan’i Jean-Luc Barthez, tomponandraikitry ny fampandrosoana ny rugby aty Afrika, eo anivon’ny IRB, fa anton’izany ny hanatsarana sy hampakarana ny lentan’ny fifaninanana.
Nomarihin-dRakotomalala Marcel, filohan’ny federasiona, kosa fa na nitaky ny hanovana izany aza ny IRB, tsy haka tahaka be fahatany ny zava-misy any Eoropa ny Malagasy fa tsy maintsy mijery izay mampety sy mahatsara ny fihaonana eto Madagasikara.
Mandra-piandry izany aloha, hotontosaina, etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny alahady 17 janoary ho avy izao, ny famaranana hiadiana ny “Top 14 Analamanga”. Fihaonana hikatrohan’ny Cosfa sy ny 3FB.